September 18, 2020 - Hargeele - Wararka Somali State
Cayaaraha September 18, 2020
(Manchester) 18 Sebt 2020. Tababaraha kooxda kubadda cagta Manchester City ee Pep Guardiola ayaa ka hadlay go’aanka Lionel Messi ee ah inuu sii joogayo Barcelona xilli ciyaareedkan cusub ee 2020/21. Pep Guardiola ayaa dhinaca kale hadlay xaalada dhaawacyada ee kooxda Manchester City, kahor kulanka ay Isniinta ka ciyaarayaan horyaalka Premier League. Tababaraha Sii akhriso
(Argantina) 18 Sebt 2020. Waxaa la shaaciyey Liiska xiddigaha xulka qaranka Argentina uga qeyb-galaya labada kulan soo aaddan ee isreeb-reebka Koobka Adduunka 2022. Tababaraha xulka qaranka Argentina ee Lionel Scaloni ayaa ku dhawaaqay liiska xiddigaha kaga qeyb galaya labada kulan Ecuador iyo Bolivia ee isreeb-reebka Koobka Adduunka 2022 lagu qaban doono dalka Qatar. Sii akhriso
Somali News September 18, 2020
ICE removes Somali man convicted of aiding terror group U.S. Immigration and Customs Enforcement NewsroomSii akhriso
Soomaaliya September 18, 2020
Muqdisho (ISONNA)-Daahfurka shirakadda maraakiibta ganacsiga Djibouti oo maanta markabkii ugu horeeyey oo shirkaas u rarnaa ku soo xirtay dekada Muqdisho ayaa si toos ah uga hawl bilowday Soomaaliya. Maxamed Cabdixaliim wakiilka shirkadda oo ka hadlay munaasabad gudaha dekadda Muqdisho lagu qabtay ayaa sheegay in shirkadooda 14-maalin oo keli ah ay kaga keeni doonto Sii akhriso
(Liverpool) 18 Sebt 2020. Liverpool ayaa si rasmi ah u shaacisay inay la soo wareegtay ciyaaryahanka khadka dhexe ee reer Spain Thiago Alcantara, kaasoo kaga soo biiray naadiga Bayern Munich. Liverpool ayaa war rasmi ah ku daabacday website-keeda rasmiga ah iyo dhamaan goggageeda baraha bulshada sida, Facebook, Twitter, waxay ku xaqiijisay inay dhameystirtay heshiiska Sii akhriso
Shaqooyinka September 18, 2020
Country: Ethiopia Organization: Crown Agents Closing date: 30 Sep 2020 About the role Despite this sustained high growth, Ethiopia ranks 173/188 in the 2018 UNDP Human Development Index, 126/141 in the 2019 Global Competitiveness Index, and 159/190 in the 2019 World Bank Doing Business Index. Also, increased reliance on megaprojects to fuel growth led to […]Sii akhriso
(Yurub) 18 Sebt 2020. Wargeyska “Gazzetta dello Sport” ee dalka Talyaaniga ayaa xaqiijiyay in ku biirista Luis Suarez ee kooxda Juventus ay wali macquul tahay, sida uu laacibku saxaafada u sheegay. Magaca Luis Suarez ayaa lala xiriirinayay inuu ka tagayo safka kooxda Barcelona xagaagan, kaddib markii uu noqday xiddig uusan u baahneyn tababaraha reer Sii akhriso
(Manchester) 18 Sebt 2020. Kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa si rasmi ah u shaacisay laacibka ku guuleystay abaal-marinta xiddiga sanadka ee kooxda. Laacibka khadka dhexe reer Portugal ee Bruno Fernandes ayaa ku guuleystay abaal-marinta xiddiga sanadka ee Kooxda Manchester United. De Bruyne ayaa helay codad dhan 35.5%, wuxuuna abaal-marinta ku garaacay Sii akhriso
Country: Ethiopia Organization: International Labour Organization Closing date: 8 Oct 2020 Request for Proposal Service contract for the development of Labour Inspection Case Management System Background Advancing Decent Work and Inclusive Industrialization in Ethiopia is a comprehensive and coordinated ILO response to a need expressed by the Ethiopian constituents and Sii akhriso
Wax-qabadka Taliska Ciidanka Asluubta oo lagu maamuusay Muqdisho
Munaasbaad lagu maamusayay wax qabadka taliyaha ciidanka Aluubta Soomaaliyeed ayaa lagu qabtay Muqdisho taasi oo ay ka qeyb-galeen sii hayaha Wasiirka Cadaalada Dalka, masuliyiin ka tirsan labada Gole,saraakiil ka tirsan dowladda Federaalka iyo koofur galbeed. Sii hayaaha Wasiirka Cadaalada Soomaaliya Abukaate Xasan Xuseen xaaji ayaa sheegay iskaashi weyn kaddib lagu Sii akhriso